माहुरीको चाकाको संरचना | सृष्टि या संयोग?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उर्दू एस्टोनियन कन्नडा किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्रोएसियन क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या डच डेनिश तामिल तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंजाबी पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बुल्गेरियन भियतनामिज मराठी मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुभेल सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
माहुरीको पेटको तल्लो भागमा हुने ग्रन्थीले मैन पैदा गर्छ। यही मैनद्वारा माहुरीले चाका बनाउँछ। माहुरीको चाकाको संरचनामा अचम्मलाग्दो डिजाइन पाइन्छ। किन?
विचार गर्नुहोस्: सयौं वर्षदेखि गणितिज्ञहरूले कुनै ठाउँलाई वर्गाकार (सक्वायर) वा समभुजीय त्रिकोण आकारले विभाजन गर्नुभन्दा षड्भुज (६ वटा भुजाले बनेको भुजा) आकारले विभाजन गर्नु सबैभन्दा राम्रो तरिका हो भनी अनुमान गरेका थिए। किनभने षड्भुज आकारले निर्माण गर्दा थोरै सामग्री प्रयोग गरेर ठाउँ ठूलो बनाउन सकिन्छ। तर तिनीहरूले किन षड्भुज आकारले बनाउनु राम्रो हो भनी प्रमाणित गर्न सकेनन्‌। सन्‌ १९९९ मा प्राध्यापक थोमस सी. हेल्सले माहुरीको चाकाको आकार अर्थात्‌ षड्भुज आकारले निर्माण गर्नु सबैभन्दा राम्रो तरिका हो भनेर गणितबाटै प्रमाणित गरेर देखाए। तिनले कुनै ठाउँलाई षड्भुज आकारमा विभाजन गर्दा थोरै निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर धेरै कोठाहरू बनाउन र ठाउँको पूरापूर सदुपयोग गर्न सकिने कुरा प्रस्ट्याए।
यस्तै गरी माहुरीले पनि षड्भुज आकारको कोठाहरू बनाएर आफूसित उपलब्ध ठाउँको पूरापूर फाइदा उठाउँछ। माहुरीले आफ्नो थोरै मैन प्रयोग गरेर हलुका तर कडा चाका निर्माण गर्छ। त्यसमा माहुरीले धेरै भन्दा धेरै मह भण्डार गर्छ। त्यसैले माहुरीको चाकालाई इन्जिनियरको “उत्कृष्ट कृति” भन्दा अचम्म मान्नु पर्दैन।
वैज्ञानिकहरू अहिले माहुरीको चाकाको नक्कल गर्दै बलियो र ठाउँको पूरापूर सदुपयोग हुने संरचनाहरू निर्माण गर्न लागिपरेका छन्‌। उदाहरणका लागि विमान बनाउने इन्जिनियरहरूले माहुरीको चाकाजस्तै आकार भएको पाताको प्रयोग गरेर हलुको, बलियो र थोरै इन्धन खपत गर्ने विमानहरूको निर्माण गरेका छन्‌।
तपाईंलाई कस्तो लाग्छ? माहुरीको चाकाको उत्कृष्ट संरचना विकासवादको उपज हो या सृष्टि? g15-E 01)
जीवन सृष्टि कि संयोग?
जीवनको सुरुवातबारे तपाईँले विश्‍वास गर्ने कुराले फरक पार्छ।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने माहुरीको चाका
परिवारका लागि रिस कसरी नियन्त्रण गर्ने?
परिवारका लागि सासू-ससुरासित कसरी राम्रो सम्बन्ध कायम राख्ने?
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प ब्यूँझनुहोस्! ईश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो कत्तिको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने ब्यूँझनुहोस्! ईश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो कत्तिको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो?
ईश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो कत्तिको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो?
ब्यूँझनुहोस्! ईश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो कत्तिको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो?
समुद्री कौडीको आकार
पोलिया बेरिको चहकिलो निलो रङ्‌ग
समुद्री अटरको भुत्ला
मौरीको अवतरण गर्ने तरिका